Laacibka Kooxda Everton Ee James Rodriguez Ayaa Meesha Ka Saaray Ku Laabashada Real Madrid
Home Horyaalka Ingiriiska Laacibka kooxda Everton ee James Rodriguez ayaa meesha ka saaray ku laabashada...
Kubadsameeyaha Everton James Rodriguez ayaa xaqiijiyay in “cidna” aysan ka rabin Real Madrid iyadoo ay jiraan warar ku saabsan mustaqbalkiisa.
29 jirkaan ayaa yimid Merseyside xagaagii 2020 ka dib markii uu boos ka waayay Zinedine Zidane , mana aysan qaadan waqti dheer in Rodriguez uu la qabsado nolosha England.
Xaqiiqdii, ciyaaryahanka reer Colombia wuxuu ku faanaa shan gool iyo afar caawin 18 kulan oo Premier League ah oo uu saftay xilli ciyaareedkan, inkasta oo uu isku arkay inuu ka tagayo kooxda iyadoo ay jiraan warar sheegaya inuusan ku faraxsanayn garoonka Goodison Park.
Si kastaba ha noqotee, Rodriguez wuxuu si dhaqso leh u joojiyay wararka xanta ah ee ku saabsan soo laabashada Real Madrid inta lagu gudajiray barnaamijka ‘ Twitch livestream’, wuxuuna yiri: “Qorshahaygu kumajiro, Real Madrid.
“Yaa garanaya waxa dhici kara labo, seddex ama afar sano gudahood maxaa yeelay wax walba ayaa ka dhici kara kubada cagta, laakiin uma maleynayo sidaas. Waqtigaan la joogo maya. Cidina igama rabto halkaas, waa qeyb ka mid ah kubada cagta.
Tababaraha Everton Carlo Ancelotti ayaa sidoo kale meesha ka saaray wararka xanta ah ee sheegaya in ciyaaryahankii hore ee Real Madrid uu doonayo inuu baxo.
Previous articleMadaxa Paris Saint-Germain Leonardo ayaan hubin heshiiska joogtada ah ee Moise Kean
Next articleParis Saint-Germain, iyo Inter Milan oo ku biiraya tartanka Georginio Wijnaldum’